Omeo visa e-fizahan-tany any India izao, ka manainga ny mpitarika IATO teo aloha
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Omeo visa e-fizahan-tany any India izao, ka manainga ny mpitarika IATO teo aloha
Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Editorial • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Visa momba ny mpizahatany
Ny mpitarika ny fizahan-tany sy fizahan-tany, Subhash Goyal, filohan'ny vondrona STIC ary filohan'ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany (IATO) teo aloha dia nilaza fa mila manomboka mamela ny visa e-fizahan-tany any India ny firenena ary manamboatra sidina iraisampirenena amin'ny volana septambra ary Oktobra hanombohana ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatra.
COVID dia hijanona, ary mila mianatra miaina miaraka amin'izany isika, hoy i Goyal.
Ny ankamaroan'ny mpizahatany ao India dia tonga eo anelanelan'ny Oktobra sy Martsa, noho izany, ity vanim-potoana ho avy ity dia tena zava-dehibe.
Mpanangom-dia sy mpandraharaha mpizahatany an'arivony maro no efa bankirompitra. Ny hany fanantenana ho tafavoaka velona dia ny fanombohana ny visa e-fizahan-tany sy ny sidina iraisam-pirenena voalahatra.
Hoy ihany i Goyal:
Tokony hahatanteraka ny nofinofin'ny praiminisitra isika amin'ny fanaovana India ho toekarena 5 tapitrisa tapitrisa. Ny fizahantany no hany indostria miasa mafy ary misy fiatraikany lehibe amin'ny toekarena. Noho izany dia mila mihetsika isika dieny izao alohan'ny tara loatra.
Ny vanim-potoana fizahan-tany ho an'i India dia manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa ary tsy mila very io fotoana io isika tamin'ny taona 2021 hatramin'ny taona 2020 fa fandroana tanteraka.
Tamin'ny taona 2019, nahazo karama vahiny Rs.2,10,981 avy any ivelany ny volana Janoary ka hatramin'ny Desambra na US $ 3.1 miliara tamin'ny volana Desambra 2019 (loharanom-baovao MOT). Nahazo mpizahatany 10 tapitrisa mahery ny firenena tamin'ny taona 2019.
Ny fizahan-tany iraisam-pirenena dia mitentina eo amin'ny 10 isan-jaton'ny harin-karena faobe any India ary manodidina ny 11 isanjaton'ny hetra mivantana sy ankolaka. Ny fandraisam-bahiny sy ny indostrian'ny fizahantany dia mampiasa olona 58 tapitrisa eo ho eo ary olona 75 tapitrisa eo ho eo any India. Manodidina ny 10 tapitrisa ny olona very asa na miala sasatra tsy misy karama.